पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाको संक्रमण नै सकिएको जसरी मान्छेहरु बाहिर निस्कन थालेका छन् । संक्रमण सकिएको होईन र अझै अवस्था बिग्रन सक्ने कुरालाई कसैले भुल्न हुँदैन । यो तुरुन्तै १ देखि २ महिनामै सकिनेवाला पनि छैन । कोरोनासँग भागेर होईन, जुधेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनासँगै आफ्ना क्रियाकलाप सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, पहिलेकै अवस्थामा जस्तै गरी कुनै मापदण्ड नै पालना नगरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भने हुँदैन । कोरोनाले हामीलाई असर नगरोस् भनेर केही कुरामा ध्यान दिएर दैनिक जीवनयापन अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सर्जिकल मास्क पानीमा भिज्यो भने त्यसलाई फेरी प्रयोग गर्न हुँदैन । सर्जिकल मास्क छैन भने ३ तह भएको कपडाको मास्क पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मास्क लगाउने तरिका बदलौँ
महत्वपूर्ण कुरा मास्क लगाउन नछाडौँ । कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत व्यक्तिले तरिका मिलाएर मास्क लगायो भने यसको सर्ने चक्रमा प्रभाव पर्न जान्छ । अहिले धेरै व्यक्तिले मास्क लगाएर हिडिरहेको देखिन्छ । तर, लगाउने तरिका मिलिरहेको छैन । मास्क लगाउने तरिका जानिएन भने त्यो लगाउनु र नलगाउने कुनै अर्थ छैन ।
कसैले चिउँडोमा लगाएको देखिन्छ भने कसैले मुखमा लगाएर नाक खुल्ला छाडेको देखिन्छ । खोल्दा र लगाउँदा पनि त्यति धेरै ध्यान दिएको पाईंदैन । मास्क कोरोनाका लागि मात्रै लगाएको भनेर बुझ्नुभएन । मास्क लगाईयो भने अरु रोगको संक्रमणबाट पनि बच्न सक्छौँ ।
मास्क सही तरिकाले लगायौँ भने हात सिधै नाक र मुखमा जान पाउँदैन । अर्को भनेको नजिकै कोरोना संक्रमित छ भने पनि त्यसले छेक्ने काम गर्छ । तर, तरिका मिलेन भने मास्कले झन असर गर्न सक्छ ।
मान्छेहरुले मास्क लगाउँदा मास्कको बाहिरी भाग छोईराखेको हुन्छ । बाहिरी भाग भनेको सबैभन्दा फोहोर जम्मा हुने ठाउँ हो । त्यो भागमा छोईयो भने संक्रमण सर्ने डर हुन्छ । यदि बाहिरी भागमा छोईयो भने तत्काल कि त हात धुनुपर्‍यो की त सेनिटाईजर दल्नुपर्‍यो ।
भौतिक दुरी अनिवार्य कायम गरौँ
भौतिक दुरी अनिवार्य कायम गरौँ । दुरी १ मिटर राख्ने की २ मिटर भन्नेबारेमा फरक मतहरु आईरहेका छन् । अगाडीको मान्छेले मास्क लगाएको छ भने १ मिटरको दुरीमा बस्दा पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ । तर, मास्क लगाएको छैन भने १ मिटरले पुग्दैन २ मिटरभन्दा धेरै नै दुरी कायम गर्नुपर्छ ।
अहिले बजारमा मान्छेहरु हिडेको देख्दा कतैपनि दुरी नै कायम गरेको पाईदैन । जथाभावी हिंडिरहेका छन् । यसले उनीहरु स्वयं आफैं असुरक्षित छन् । हामी जहाँ जान्छौँ, जे काम गर्दै छौँ, भौतिक दुरी अनिवार्य कायम गरौँ । सके २ मिटरभन्दा बढी नै कायम गरौँ, सम्भव छैन भने १ मिटरको मात्रै भए पनि दुरी कायम गरौँ ।
बेलाबेला हात धुने र सेनिटाईज गर्ने गरिरहौँ
हामीले थाहा नपाउँदा नपाउँदै पनि हाम्रो हातले धेरै कुराहरु छोईरहेको हुन्छ । कहिले नाक, आँखा, मुख त कहिले टाउको र शरीरका अंगबाहेक अरु ठाउँहरुमा पनि हाम्रो हात गैरहेको हुन्छ ।
हातमा जस्तोसुकै संक्रमण पनि रहने भएकोले कोरोनाबाट बच्न मात्रै नभई अरु रोगको संक्रमणबाट बच्न पनि बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धोईरहनुपर्छ । सबै ठाउँमा साबुन पानीको उपलब्धता नहुने भएकोले गोजीमा सेनिटाईजर राखेर हिड्ने गरौँ । जहाँ जान्छौँ, बेला बेलामा सेनिटाईजर प्रयोग गरिरहनुपर्छ । यसो गरियो भने हातमा संक्रमण छ भने पनि नष्ट हुन्छ । हाम्रो शरीरभित्र संक्रमण प्रवेश गर्न पाउँदैन ।
कार्यलयमा कसरी सजह गर्ने ?
हामी कार्यलयमा छौँ भने आफूभन्दा नजिकको या अगाडीको व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी राखौँ । स्वास्थ्यका मापदण्डअनुसार आवश्यक सामग्री कार्यलयले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सेवाग्राही आयो भने गेटमै पनि सावुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हात धोएर कार्यलयभित्र गयो र मास्क लगायो भने त यसले केही पनि गर्न पाउँदैन । मान्छेहरु भीडभाड हुने कार्यलयमा केही सिष्टमहरु विकास गर्नुपर्छ, जसले भौतिक दुरी कायम गर्न सहयोग पुगोस् । अनलाईनमार्फत गराउन सकिने कामहरुमा हामी त्यो बाटो अवलम्बन गरौँ ।
नभेटी नहुने भएमात्रै कार्यलय जाने गरौँ । अनलाईनबाटै गर्न सकिने सबै कामहरु घरबाटै गरौँ । कर्मचारीहरुले पनि भौतिक दुरी कायम गरी काम गरौँ र बेलाबेलामा आफ्नो हातलाई सेनिटाईज गरिरहनुपर्छ ।
सार्जजनिक गाडीमा कसरी सजग बन्ने ?
सरकारले केही मापदण्डसहित गाडी चलाउने स्वीकृती दिएको छ । सिटमा एकजना मान्छे मात्रै राख्ने, बीचबीचमा गाडीहरुलाई सेनिटाईज गरिरहने, गाडीमा आउने व्यक्तिहरुलाई पनि सेनिटाईजको व्यवस्था गर्ने, सबैलाई मास्क लगाएर मात्रै गाडीमा चढ्न दिने गर्नुपर्छ । यी मापदण्डहरु अभ्यासमै उतार्नुपर्छ । गाडी सञ्चालकहरुले योबारे निक्कै ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग रहेका सार्वजनिक गाडी धेरै नै असुरक्षित छन् ।
तरकारी बोकेर घर पुगुन्जेलसम्म हातले मुख, नाक र आँखा छुने काम नगरौँ । सामन लिएर घर पुग्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ ।
हामीकहाँ रहेका सार्वजनिक गाडीहरुमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । गाडीभित्र बस्दा गाडीको झ्याल बन्द गर्नु हुँदैन । बन्द ठाउँमा भाईरसको संक्रमणण चाँडै फैलने भएकोले गाडीमा यात्रा गर्दा झ्यालहरु सबै खोेलेर राख्नुपर्छ । २ देखि ३ घण्टाको बीचमा गाडीलाई भित्रको भागमा सेनिटाईज गरिरहनुपर्छ । यति काम गरेर गाडी चलाउँदा फरक पर्दैन ।
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा के गर्ने ?
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मान्छेहरुलाई क्याम्प गरेर नै राख्नुपर्ने हुन सक्छ । क्वारेन्टिनका केही गाईड लाईनहरु पनि छन् । क्वारेन्टिनमा झण्डै २ लाख मान्छे हुँदा सरकारलाई निक्कै गाह्रो भएको थियो । बाहिर खुल्ला आकाशमा त थोरै नजिक भएर केही फरक परेन ।
प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्दा कम्तिमा पनि मास्कको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ । बाढी पहिरो प्रभावितलाई सेनिटेशनको व्यवस्था, दिशा, पिसाब गर्ने ठाउँको व्यवस्था, हात धुने ठाउँलगायत न्युनतम यतिको व्यवस्थापन त गर्नु नै पर्छ । नत्रभने बाढी प्रभावित क्षेत्र नै कोरोनाको हटस्पट हुन बेर छैन ।
खाद्यान्न तथा तरकारी किनबेच हुने ठाउँमा के गर्ने ?
तरकारी बेच्ने एवं पसलेहरुले आफूले मास्क लगाईराख्नुपर्छ । किन्न जानेहरुले त झन बाटोमा विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन सक्ने भएकोले अनिवार्य मास्क लगाउनु नै पर्छ । यदि कसैले मास्क नलगाई सामान किन्न आएको अवस्था हो भने त्यो मान्छेलाई सुरुमै मास्क लगाउन आग्रह गर्नुस् ।
सामान, तरकारी र खाद्य बस्तु छुँदा विभिन्न संक्रमणको डर हुन सक्छ । तरकारी बोकेर घर पुगुन्जेलसम्म हातले मुख, नाक र आँखा छुने काम नगरौँ । सामन लिएर घर पुग्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ ।
अस्पतालमा के गर्ने ?
सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका हिसावले चुनौती रहेको ठाउँ भनेको अस्पताल हो । टिकट अनलाईन मार्फत बुकिङ गर्ने गरौँ । बिरामीको रिपोर्ट पनि अनलाईनमार्फत नै उपलब्ध गराउने गरौँ । यसो गरियो भने मानिस मानिसबीचको सम्पर्क रहँदैन । एक व्यक्तिमा रहेको संक्रमण अर्को व्यक्तिको शरीरमा सर्ने खतरा रहँदैन ।
बिरामी अनिवार्य अस्पताल जानैपरे पनि बिरामीसँग अरु धेरै व्यक्ति नजाऔँ । बिरामीसँग एकजना कुरुवा साथि मात्रै जाँदा राम्रो हुन्छ । कोही व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएको छ भने फलफुल लिएर जाने, भीडभाड गर्ने चलन छ, त्यसो कहिल्यै नगरौँ । यसले संक्रमण बढाउन सक्छ । अस्पतालमा बिरामीको उपचार चिकित्सकहरुले गरिरहेका हुन्छन् । आफन्तहरु घरमै बस्ता राम्रो हुन्छ ।
सुरुमा डाक्टरहरुमा पनि धेरै डरहरु थिए । डाक्टरहरु सबैभन्दा धेरै खतराको घेरामा रहेकाले उनीहरुले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बिरामी जाँच्न डाक्टरहरु आफूले अनिवार्य मास्क लगाउने, मास्क नलगाएका बिरामीलाई अस्पतालमा छिर्न नदिने, जाँच गर्ने ठाउँमा साबुन पानी अनिवार्य व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
स्कृन टेष्टहरुबाट लक्षण परीक्षण गरेर कोरोना छ की छैन भनेर जाँचेर मात्रै उपचार पद्धति अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तो लक्षण देखियो भने तत्काल कोभिड-१९ का लागि छुट्याईएको आईसोलेशनतिर पठाउँछौँ । यदि संक्रमण छैन भने मात्रै जनरल ओपीडीमा छिर्न दिने काम हुन्छ । उहाँहरुले बस्दा, उठ्दा, कतै जानुपर्दा दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दाससँग साझापोष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)
डा. सन्तकुमार दासclose